FAQ Service - AlorAir
Sidee dehumidifiers shaqeeyaan?
Dehumidifiers saaro qoyaan ka soo hawada iyo ku rid galay Iskubedelka qabow iyo kulayl, taas oo marka hore u beddesho karaan hawada si uumiga by kululaynta. Markaas ka soo degayaa uumiga on tube keenida ah. Ugu dambeyntii, biyo condensate waa qaadan doonaan by koollo ah dheecaan.
My rido uma shaqeeyo, maxaan samayn karaa?
1). Hubi kala duwan heerkulka iyo in la hubiyo fur ayaa ku habboonayn in la geliyo.
2) .Booqo www.alorairsolutions.com iyo galaan habka FAQ Diiwaangelinta Free in ay diiwaan su'aalahaaga. waaxda adeegga Our kula soo xidhiidhi doona oo markiiba bixiyaan xalka.
3). Sidoo kale waxaad soo diri kartaa e-mail Waaxda Adeegga AlorAir by sales@alorair.com cinwaanka wixii macluumaad dheeraad ah. Ama waxaad la xiriiri kartaa qaybiyaha ee xaafaddaada ama Service Department AlorAir at 888-990-7469 wixii macluumaad dheeraad ah
Maxaa habboon in aan la qaylada weyn ku marka hawlaha unit ku sameeyaan?
Marka hore, hubi in unit la shaqeeya dhulka ku fidsan oo adag. Marka labaad, hubi mesh filter ah si loo hubiyo in aan u buuxda. Haddii mesh filter waa buuxda, fadlan iska bixi oo nadiif ah.
Waxaan hesho nooc ka mid ah code oo gaabnaa on my guddi gacanta. Halkee ayaan ka heli karaa liiska codes baadi?
codes Error la heli karaa laga soo saaray buugga milkiilayaasha '(waxa kale oo laga heli karaa www.alorairsolutions.com hoos khayraadka Product, Buuggooda). Waayo, shaki kale, fadlan na siin call a at 888-990-7469.
Waa maxay nolosha adeeg ee rido AlorAir ah?
nolosha adeeg unit ayaa waxay noqon kartaa 8 sano ama ka badan mararka kale oo badan.
caddeyn maxay badbaadada (CE, ETL, CSA, iwm) ha waxyaabaha AlorAir qaado?
Qaar ka mid ah lagu daydo our qaado ETL ah, CE iyo shahaado Energy Star.
Halkee ayaan ka heli kartaa buuga waayo, qalabka AlorAir?
Waxaad ka heli kartaa buuga Printable on our website. Haddii aadan awoodin in aad u soo dejisan, la xiriir Waaxda Adeegga AlorAir ee 888-990-7469. Waxaan fakis kartaa ama email bedelka lacag la'aan ah aad.
Ma jiraan wax dhibcood muhiim u rido kaydinta jiilaalka?
Ka hor inta kaydinta dehumidifiers jiilaalka, hubi in biyaha oo dhan waa lagaga miiro ka unit ka soo baxay. Intaa waxaa dheer, in la hubiyo in biyo tuubo godka ayaa lagu miiro soo baxay si looga hortago in arrinkaas. cutub ayaa waxaa lagu ma weatherized, si ay u aan la baxsan saari karo.
Halkee ayaan ka heli kara wax soo saarka AlorAir ii adeegi?
Inta badan aad unit looga adeegi karo farsamayaqaan HVAC shahaado; Waxa kale oo aad ka samatabbixin kara, unit noogu soo celi, waayo, adeegga. Fadlan naga soo wac 888-990-7469 si uu ku ogaado si loo bilaabo nidaamka.
Waa maxay siyaasadda soo laabtay AlorAir ee?
Fadlan tixraac siyaasadda soo laabtay AlorAir ee website www.alorairsolutions.com.
Sidee baan u markab aan qalabka?
Waxaan ku talineynaa in maraakiibta unugga by FedEx Express Saver.